WAR DEG DEG AH: Qarax Xoogan Hada Ka Dhacay Magaalada Gaalkacyo | Hobyo Media Online
WAR DEG DEG AH: Qarax Xoogan Hada Ka Dhacay Magaalada Gaalkacyo
HM__Xafiiska Gaalkacyo Wararka naga soo gaaraya Waqoyiga magaalada Gaalkacyo ee gobalka Mudug ayaa sheegaya in laga maqlay dhawaaqa qarax magaalada, waxaana ilaa hadda aan la aqoon cidda lala beegsaday.
Dad kusugan gudaha magaalada ayaa sheegay in la maqlay qaraxan oo ka dhacay Agagaarka xerada Ciidamada ee Kabida Puntland oo kutaala Aaga Suuq Barwaaqo.
Warar hordhac ah ayaa sheegaya in lala beegsaday baabuur nooca loo yaqaano Ceesarkaa, iyadoo aysan wali jirin faahfaahin dheeraad ah.
Wariyaasheena magaalada Gaalkacyo ayaa ku mashquulsan helida xogta la xariirta dhacdada qaraxa ee la maqlay.
Update 6: 20 Galabnimo Saacada Somaliya : Live Warar Hada soo kordhay 1 : Qaraxa ayaa la sheegay in lagu xiray gaari uu lahaa Gudoomiye ku xigeenka Magaalada Gaalkacyo.
Mas’uulkaasi ayaa la sheegay in uusan saarneyn gaariga xilli uu qarxaayay, waxaana ku dhaawacmay mid ka mid ah Ilaaladiisa.
Update 6: 30 Galabnimo Saacada Somaliya : Live Warar Hada soo kordhay: Ciidamo ah kuwa puntland aya hada goobta soo gaaray , wadooyinka u dhaw dhaw goobta uu qaraxa ka dahcay ayaana la xiray , waxana yimid mesha sida wariyaasha hobyomedia.com ay ku so waramayan saraakiil cidan gobta uu falka a dhacy.
Update 6: 35 Galabnimo Saacada Somaliya: Waqooyiga Gaalkacyo aya wayan waxa ka dhacayay falal amniga lidi ku ah , waxana gudaha dhanka waqooyyiga gaalkacyo xarumo waa wayn ku leh ciidamo kala duwan oo ka tirsan ciidanka maamulka Puntland.
Update 6: 55 Galabnimo Saacada Somaliya: Saraakiisha lama amaanka waqooyiga gaalkacyo aya xajiyay in ay jiraan dhawcyo fudud oo soo garay masuuliyin inkstoo aysan caraababin inta uu le eg yahay dhawacaasi.
Update 7: 00 fiidnimo (Habeenimo ) Saacada Somaliya: Gudoomiye ku xigeenka Degmada Gaalkacyo Gaar ahan Waqooyiga gaalkacyo ee Dhanka Puntland Farxaan Cabdi Gaafa aya la haya sida hobyomedia.com ay xaijiisiyay gaariga la qarxiyay waxana sidoo kale wararku ay shegeen in uusan saarneen gaariga xiliga gaarigiisa uu qarxay , qaraxa aya la shegaya in uu ahaa mid gaarigiisa loogu xiray
Live wixii ku soo kordha kala soco barnaamijyadeena danbe insha alah